ဟာသ Archives - MM Daily Life
December 2, 2021 by MM Daily Life
စကတ်လှန်ပြရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းမေးမယ်လို့ပြောတဲ့လူပျိုကြီးအား စကတ်လှန်ပြီးပညာပေးလိုက်တဲ့ ဆီဆိုင်ကကောင်မလေး ကားပေါ် မှာ လူပျိူကြီးနဲ့ ကောင်မလေး အတူတူ ဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံး ဝင်းဝင်းလေးကို မမြင် မြင်အောင် ပြတယ်။ အဲဒီမှာ လူပျိူကြီး က အတင့်ရဲပြီး … နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်း ပေးမယ် ဆိုတော့ …. ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံ ကို တခါတည်းတောင်းပြီး စကပ်ကို အပေါ်တင်ပေးတယ်။ နောက် …ညု တုတုနဲ့ ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက …. ရှင် နောက်ထပ် တစ်သောင်းထပ်ပေးရင် … ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့ နေရာ ပြမယ်ဟာ …. လူပျိူကြီး တံတွေးသီးသွားပြီး ပိုက်ဆံ တစ်သောင်း ကိုလည်း … Read more
ဒီည အားလား…ကျမ ဒီနေ့ စိတ်တွေ လွှတ်ပလိုက်တော့မယ်…
ဒီည အားလား…ကျမ ဒီနေ့ စိတ်တွေ လွှတ်ပလိုက်တော့မယ် သေးထွက်အောင် ရီရမယ့် ဟာသ (၃) ပုဒ် ဒီည အားလား ? သူမ သည် ခေတ်ဆန်၏။ချော၏။လှ၏။ကိတ်၏။ ပုရိသ များအား ဖမ်းစားနိုင်သူဟု ဆိုနိုင်၏။ သူမ သည် ကျနော့် အိမ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်တွင် တစ်ကိုယ်တည်းနေသော အပျိုချော ဖြစ်၏။ တစ်နေ့ ညနေခင်းတွင် ကျနော် အိမ်ရှေ့ထိုင်ခုံ၌ ထိုင်နေတုန်း သူမ အိမ်ပြန်လာတာကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ငေးကြည့်နေစဉ် ထူးထူးခြားခြား ကျနော် ထိုင်နေရာဆီကို တန်းတန်းမက်မက် လျှောက်လာနေတော့ ကျနော် အံ့သြနေရင်း… အနားရောက်တော့ သူမ က နူးညံတဲ့ အပြုံးတပွင့် ဖြင့် ကျနော့်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ကျနော်လည်း ပျာပျာသလဲနှင့် မက်တပ် … Read more
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်…ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်…ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုးိသမီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး ရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦၤး ည မှာ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယ အိမ်ထောင် ကျတော့ရော…” “ဒုတိယ ယူတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေး … Read more
LIVE လွင့်နေတာကို မေ့ပြီး ရှက်ရှက်တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်မ(ရုပ်သံ)…
Live လွင့်နေတာကို မေ့ပြီး အာသာဖြေမိတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး ရုပ်သံ လူကြည့်များနေပြီ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ တင်ထားပေးပါတယ် ဆိုးဝါးလိုက်တာ ကောင်မလေးရယ် ဘယ်လိုတွေဖြစ်ရတာလဲ ခေတ် ပျက်တာလား ဘာလားမသိတော့ပါဘူး သမီးမိန်းကလေး မွေးရမာတောင် ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ခေတ် ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမယ်တောင်မသိတော့ပါဘူး ခေတ်မီတယ်ဆိုတာလည်း အတော်လောက်ပဲကောင်းပါတယ်တယ် အရှက်သိက်ခါ မရှိကြတော့ပါလား မြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်နော် တော်တော်လွန်နေပါပြီး ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်နေလဲ စဉ်းစားလိုတောင် မရဘူး သေချာကြည့်လိုက်ပါတော့ မူရင်း ငေက်ာ် ကြည့်ပီးမဆဲရဖူးနော် Zawgyi Live လြင့္ေနတာကို ေမ့ၿပီး အာသာေျဖမိတဲ့ ျမန္မာမိန္းကေလး ႐ုပ္သံ လူၾကည့္မ်ားေနၿပီ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေအာက္ဆုံးမွာ တင္ထားေပးပါတယ္ ဆိုးဝါးလိုက္တာ ေကာင္မေလးရယ္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ရတာလဲ ေခတ္ ပ်က္တာလား ဘာလားမသိေတာ့ပါဘူး သမီးမိန္းကေလး … Read more
December 1, 2021 by MM Daily Life
အသက်ရှုကြပ်လို့ဆိုပြီး မိန်းမပျိုတစ်ယောက် ဆေးရုံရောက်လာတယ်။ PPE အပြည့်အစုံနဲ့ ဆရာဝန်က လူနာရာဇဝင်မေးရတော့တာပေါ့။ Doctor – ဘာဖြစ်လဲ။ Lady – အသက်ရှုအရမ်း ကြပ်နေလို့ဆရာ။ Doctor- အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တာရှိလား။ Lady – ဟင့်အင်း။ ကျွန်မ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်တာ တစ်လကျော်ပြီ။ Doctor- ဖျားလား။ Lady – ဟင့်အင်း။ Doctor- နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး။ Lady – ဟင့်အင်း။ Doctor- အနံ့အရသာ။ Lady – မပ်က္ဘူးဆရာ။ Doctor- မောတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ကြွက်သားနာတာတွေ။ Lady – မရှိဘူးဆရာ၊ အသက်ရှုကြပ်တာတစ်ခုပဲ။ ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ကြည့်တော့လည်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းမှု တစ်စုံတရာ မတွေ့။ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏလည်းပုံမှန်။ထုံးစံအတိုင်း … Read more
ကိုယ့္အမရဲ႕ သတိုးသားေလာင္းကို ျမဴဆြယ္မိတဲ့ ေကာင္မေလး ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္…
November 29, 2021 by MM Daily Life
လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။ သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (မီနီ-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး…။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ် သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်…။ ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့…။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ညီမလေးက ကျွန်တော့် အနားကို ကတ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောတယ်…။ သူ့အစ်မနဲ့ … Read more
ကြင်ဖော်ရွေးမယ် ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်း က ကချင်မလေးတွေ ဆို ခါကာဘိုရာဇီတောင် က ရေခဲမှုံလေးတွေ လိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီး နူး ညံ့မ ယ် လို့ ထင်ခဲ့ ဖူးတာ 😁😁…
November 28, 2021 by MM Daily Life
ဖ တ် ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆက်မရီနိုင်တော့ဘူး ကြင်ဖော်ရွေးမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တုန်းက ကချင်မလေးတွေဆို ခါကာဘိုရာဇီတောင်က ရေခဲမှုံလေးတွေလိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီး နူးညံ့မယ်လို့ ထင်ခဲ့ဖူးတာ..ဒါပေမယ့် မြင်တွေ့ခဲ့သမျှကတော့ ပွယောင်းယောင်းအသားနဲ့ ဘာအရက်လာလာ ကိုယ်နဲ့ အပြိုင်သောက်နိုင်တဲ့စကေးပဲ မယုံရင် လုလုအောင်ကို မိတ်ကပ်မလိမ်းခိုင်းဘဲ သွားကြည့်.. က ယားမလေးတွေကျပြန်တော့ အေးလွန်းတယ်.. တစ်ချို့ အဲဒီကလာတဲ့သူတွေရဲ့ အိမ်ကိုသွားလည်ဖူးတော့.. နာရီဝက်သာကြာသွားတယ်.. သူ့ဆီက စကားတစ်ခွန်း မထွက်ဘူး.. သစ္စာတော့ ရှိတယ်.. အနေအေးပြီး စကားနည်းလွန်းလို့ ဆီလီကွန်အရုပ်ဝယ်တာမှ ကိုယ့်အတွက် ပိုအဆင်ပြေမှာ.. ကရင်မလေးကတော့ နှစ်တော်တော်ကြာနေခဲ့တော့ ကောင်းကောင်းသိတယ်..မြို့ပေါ်ကရင်နဲ့ ရွာကရင် ကတော့ နည်းနည်းကွာတာရှိတယ်.. ရွာမှာနေတဲ့ ကရင် သစ္စာရှိချက်က ကိုယ့်ယောက်ျား အိမ်မှာအရက်ထိုင် သောက်ခိုင်းပြီး သူက ယာထဲကိုင်းထဲ ဆင်းတတ်တဲ့အမျိုး… သစ္စာရှိတယ်.. ခြေသလုံးတုတ်တယ်.. ဝက်သားကြိုက်တယ်.. … Read more
ငါးမျှားနေတဲ့ ဖိုးထောင် ဉာဏ်ကောင်းချက် ချောင်းထဲမှာ အဝတ်မပါပဲ ရေချိုးနေတဲ့ ကောင်မလေး ဘာပြောကောင်းမလဲ
November 27, 2021 by MM Daily Life
ငါးမျှားနေတဲ့ ဖိုးထောင် ဉာဏ်ကောင်းချက် လက်ဖျားတောင်ခါရတယ် ဉာဏ်တော့_ကောင်းရတာပေါ့ တစ်ခါက မိန်းပျိုလေးတစ်စု တောတောင်တွေထဲ လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နေရာမှာ သာယာလှပတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခု တွေ့တာနဲ့ အားရရွှင်မြူးစွာ ရေကူးကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမပျိုတစ်ဦးက.. ” ငါတို့မှာ အဝတ်အစားအပိုမှမပါတာ..ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ” ပြောတော့.. နောက်တစ်ဦးက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ပြီး.. ” ကိစ္စမရှိပါဘူး..လူသူလေးပါးကင်းပါတယ်…အကုန်ချွတ် ပြီး ဆင်းကူးကြတာပေါ့ ” ဆိုပြီး အားလုံး အဝတ်တွေချွတ် ကာ ချောင်းဘေး ခြုံပုတ်တွေပေါ်တင်ထားပြီး ရေဆင်းကူး ကြပါတော့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့.. သူတို့ရေချိုးနေတဲ့ စမ်းချောင်းအထက်ပိုင်းမှာ မောင်ရိုးနဲ့ ဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ လူငယ်၂ယောက် ချောင်းဘေးကခြုံပုတ်အနောက်မှာ ငါး ထိုင်မျှားနေကြပါတယ်။ ချောင်းအောက်မှဆူညံသံတွေကြားလို့ ချောင်းကြည့်လိုက် တော့ မိန်းမပျိုတွေ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတာတွေ့ရတဲ့အခါ မောင်ရိုးက – … Read more
ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးဖူးလား ကြာကြာမှုတ်နိုင်လေ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းလေပါ
ရှက်စရာပေမဲ့ ပြောရဦးမယ် ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးဖူးလား ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပေးဖူးပါတယ် စလုပ်တုန်းကတော့ရှက်တာပေါ့ ဘဝမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးမှုတ်ပေးဖူးတာလေ..မသင့်တော်ဘူးထင်ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးအတွက် တကယ့်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် မိန်းမသားဘက်က ကိုယ့်ယောကျ်ားကိုအားနာလို့သာ မလုပ်ခိုင်းရင်နေမယ် သူတို့အတွက်ကတော့ တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အချိန်တိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူး ရေမိုးချိုးသန့်စင်ပြီးမှ မှုတ်ပေးရတာပါ မဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးလေ.. နှစ်ယောက်သားရဲ့အချစ်ခရီးကို ပိုခိုင်မြဲစေတာမှန်ပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပါ မှုတ်တဲ့အချိန်ကအသံထွက်နိုင်တာမို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါတယ် ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးနေပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက် ပေးမိသလိုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလေ ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုသိသာတယ်ဗျ စောစောလေးလုပ်ကြပါ ကြာကြာမှုတ်နိုင်လေ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းလေပါ..ဒါမဆံပင်တွေခြောက်ပြီး အအေးမမိတော့မှာလေဟုတ်တယ်မို့လား အတွေ့အကြုံရယ် Hair Dryer လေးရယ်တော့လိုတာပေါ့။crd zawgyi ရွက္စရာေပမဲ့ ေျပာရဦးမယ္ ေယာက်ၤားလုပ္တဲ့သူေတြ ကိုယ့္မိန္းမကိုမႈတ္ေပးဖူးလား ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့လုပ္ေပးဖူးပါတယ္ စလုပ္တုန္းကေတာ့ရွက္တာေပါ့ ဘဝမွာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ပထမဆုံးမႈတ္ေပးဖူးတာေလ..မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ရေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ခရီးအတြက္ တကယ့္ကိုလိုအပ္ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ … Read more
မိန်းမရဲ့ ဆေးတွေ အမြဲခိုးသောက်နေတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ အဖြစ်
“မောင်ရေ လာပါဦး။ ဒီမှာ သားလေးက ကျွန်မသောက်နေကျ အမျိုးသမီးအားဆေးတွေ သူ သောက်မယ်ချည်းလုပ်နေတယ်။ ပြောလို့လည်းမရဘူး” ကိုသာအေးကသူ့မိန်းမကို အသာနေဆိုသည့်သဘောဖြင့် လက်ကာပြလိုက်ပြီးသားဖြစ်သူကို “သားသား” “ဂျာဂျာ့” “အဲတာ မေမေ့ဆေးတွေလေသားရဲ့”“မေကြီးက တူတစ်ယောက်တည်း တောက်နေတယ်။ တားတားရဲ တောက်ချင်တာပေါ့ရို့”“အဲဒီဆေးက ယောင်္ကျားတွေသောက်လို့မရဘူးသားရဲ့” “တောက်မိရင် ဘာဖြစ်ရဲ”“သောက်မိသွားရင် ဟောဒီက သားသားရွှေပန်းလေး တဖြည်းဖြည်း သေးသွားပြီး အပ်ချည်မျှင်လောက်ပဲ ရှိတော့မှာ”ကိုသာအေးက သားငယ်ရွှေပန်းလေးကို လက်နဲ့တို့ပြီးပြောလိုက်တော့ သားဖြစ်သူ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်…။ “ဟင် ဂယ်ဂျီးယား” “တကယ်ပေါ့ သားသားရဲ့” “အာ့ဆို တောက်တော့ဝူး ရော့”သားငယ်က ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့် သူ့လက်ထဲကဆေးပုလင်းကို ကိုသာအေးထံ ပေးလိုက်သည်။ ကိုသာအေးက သားငယ်ထံမှဆေးပုလင်းကိုယူပြီး အောင်နိုင်သူတစ်ယောက်၏ အပြုံးမျိုးဖြင့် ပြန်လှည့်အထွက်“ဒေါင် ဂလုံ” “အမလေး သောက်ကျိုးနည်း” မိန်းမဖြစ်သူက လက်ထဲကဒယ်အိုးဖြင့် ကိုသာအေးခေါင်းကိုအားရပါးရ … Read more
စကတ်လှန်ပြီးပညာပေးလိုက်တဲ့ ဆီဆိုင်ကကောင်မလေး December 2, 2021